कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन सेल्फ आइसोलेसन जरुरी छ: निको भएर डिस्चार्ज भएकि विरामी – खबर खुराक
Home > मुख्य समाचार > कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन सेल्फ आइसोलेसन जरुरी छ: निको भएर डिस्चार्ज भएकि विरामी
कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन सेल्फ आइसोलेसन जरुरी छ: निको भएर डिस्चार्ज भएकि विरामी
६ बैशाख २०७७, शनिबार १८:५०
म अस्पतालमा भर्ना भएको १/२ दिनपछि मात्रै लक्षणहरु देखिन थालेको थियो । शुरुमा श्वास फेर्न अप्ठ्यारो भएको थियो । पेटमा दुखेको थियो भने खोकी पनि थियो । मुख्यरुपमा त्यही नै थियो ।
म सेल्फ आइसोलेसनमा नबसेको भए मेरो परिवारमा फैलिन्थ्यो र त्यहाँबाट अरुलाई फैलन सक्थ्यो । त्यसैले सेल्फ आइसोलेसन एकदमै जरुरी छ । यदी तपाईरु बाहिरबाट आउनु भएको हो भने सरकारले परीक्षणको सुविधा छ गरिदिनु होला । साथै मिडियाले पनि महामारीको बेलामा कोरोना भाइरस सम्बन्धि स्टिग्मा सिर्जना नगरौं भन्न चाहन्छु । मिडियोको महत्व अत्यन्तै छ । मेरो विषयमा पनि नकारात्मक पोस्टहरु आएको थियो । त्यस बेलामा सत्य कुरा लेख्नुहुनेलाई म धन्यवाद भन्न पनि चाहन्छु ।
जसलाई रोग लागेको छैन, उहाँहरुले के गर्यो भने संक्रमण हुँदैन ? के सल्लाह दिनुहुन्छ ?
आफू नै सुरक्षित हुनुपर्छ । मास्क लगाउनुपर्छ, पञ्जा, चश्मा पनि लगाउनुपर्छ । अनावश्यक हिँडडुल पनि नगरौं भन्न चाहन्छु ।
अहिले अन्य संक्रमित नेपालीहरु पनि हुनुहुन्छ, तपाई निको भएर अहिले कन्फिडेन्स पनि देखिनु भएको छ ? संक्रमितहरुलाई के अस्पतालमा बस्दा के गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले त धैर्यतामा बस्नहोला । मेरो पनि एकैपटक निको भएको होइन । लगातार परीक्षणपछि नेगेटिभ आएको हो । मनलाई अत्याउँछ । श्वास फेर्न गाह्रो हुने भएकाले गाह्रो हुन्छ तर आत्मबल बढाउनुपर्छ । निको हुन्छ ।
म अहिले निको भएकी छु । शरीरको प्लाज्मामा अझै एन्टिबडी छ । आशा छ कि भविष्यमा कोहीलाई पनि नहोस भन्ने कामना गर्छु साथै कोही सिरियस बिरामी हुनु भयो भने उहाँहरुलाई मैले डोनेट गरेको प्लाज्माले सहयोग गरोस भन्न चाहन्छु । जो निको हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि प्लाज्मा दिएर सहयोग गरौं भन्न चाहन्छु ।
(उपचारपछि निको भइ घर फर्कने क्रममा नेपाल टेलिभिजनसँग गरेको कुराकानी)
प्रकाशित मिति: ६ बैशाख २०७७, शनिबार १८:५०
Posted in मुख्य समाचारTagged कोरोना कहर
Previous: नेपालमा भएका कोरोना संक्रमित यी हुन् ३० जना (सूचीसहित)
Next: लकडाउन फेरि लम्बिदै